Imibuzo evame ukubuzwa - FUZHOU MIN-TAI MACHINERY CO., LTD
Yebo, siyifektri ehamba phambili yobungcweti futhi sichazwe ngomshini wokucubungula amaqanda cishe iminyaka engu-16 yokukhiqiza isipiliyoni.Sinikeza ukuthengiswa kwangaphambi kokuthengiswa, ukuthengiswa nangemva kokuthengiswa kwamakhasimende kazwelonke nakwamanye amazwe.
Intengo esiyicaphune isho ngokufunwa kwakho mayelana nokulungiswa kwemishini, sizokunikeza okuhlinzekwayo okulungile futhi okuhle kakhulu uma uqinisekisa ukwakheka komshini.
Yini isilinganiso sesikhathi sokuhola?
Isikhathi sokuhola siseduze kwezinsuku ezingama-30 zomshini owodwa, kepha isikhathi sokuhola esithile sidinga ukuqinisekiswa ngokukhethekile kulayini wokukhiqiza owenziwe ngezifiso noma isixazululo somshini.
Izindlela zokukhokha zivame ukwenziwa yi-T / T kusengaphambili noma i-L / C lapho ubona.
Okuzenzakalelayo Egg Breaking Machine, Egg Ukupakisha Machine, Umshini Wokubhoboza Iqanda Elibilisiwe, Iqanda Ukuhlela Futhi Ukupakisha Machine, Ukuchamisela Iqanda Packer, Abakhiqizi Bomshini Wokuphula Amaqanda,